सुनको भाउ बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? - ramechhapkhabar.com
सुनको भाउ बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ?
नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबारको तुलनामा आज सुन प्रतितोला ५०० रुपैयाँ बढेको हो । छापावाला सुनको मूल्य तोलाको ९२ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजावी सुनको मूल्य ९१ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्रतितोला १० रुपैयाँ बढेर चाँदीको मूल्य एक हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
काठमाडौं – हाल संचालित १९ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये पाँच कम्पनीले गरेका छन् । लाभांश घोषणा गर्नेमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स लाइफ र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । उक्त पाँच जीवन बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को लाभांश घोषणा गरेका हुन् ।